Waad (Wali) Heshay Boostada: Maxay Tahay Sababta Sirdoonka Artifishalka Loogu Tala Galay Mustaqbal Adag Oo Loogu Talo Galay E-maylada Suuqgeynta | Martech Zone
Waad (Wali) Heshay Boostada: Maxay Tahay Sababta Sirdoonka Artifishalku U Yeelanayaa Mustaqbal Xoogan Oo E-maylada Suuqgeynta
Arbacada, December 20, 2017 Michelle Huff
Way adag tahay in la aamino in emaylku jiray muddo 45 sano ah. Inta badan suuqleyda maanta waligood kuma noolaan adduun la’aan email la’aan.
Hase yeeshe inkasta oo lagu xardhay dharka nolol maalmeedka iyo ganacsiga dad badan oo naga mid ah muddo aad u dheer, haddana khibradda isticmaalaha emaylka ayaa is beddelay wax yar tan iyo markii farriinta ugu horreysay la soo diray 1971.
Hubaal, waxaan hadda ka heli karnaa emayl qalabyo badan, oo aad u qurux badan wakhti kasta, laakiin hannaanka aasaasiga ah isma beddelin. Soo diraha ayaa garaacay dirista waqti aan macquul ahayn, fariinta waxay aadeysaa sanduuqa waxayna sugeysaa in qaatuhu furo, rajo ahaan kahor inta uusan tirtirin.
Marba marka ka dambeysa sanadaha, khubarada ayaa saadaaliyey inuu maqnaanayo emaylka, laguna beddelay barnaamijyo fariin cusub oo qabow. Laakiin sida Mark Twain, warbixinnada dhimashada emaylka si weyn ayaa loo buunbuuniyey. Weli waa khad muhiim ah oo marar badan la isticmaalo ee u dhexeeya ganacsiyada iyo macaamiisha - mar dambe ma ahan midka kaliya, hubaal, laakiin waa qayb muhiim ah oo ka mid ah isku dhafka.
Qiyaas ahaan 100 bilyan oo e-mayl ganacsi ayaa la diraa maalin kasta, waxaana la filayaa tirada xisaabaadka emaylka ganacsiga inay koraan ilaa 4.9 bilyan dhammaadka sanadkan. Emailku wuxuu si gaar ah caan ugu yahay B2B, maxaa yeelay waxay u oggolaaneysaa isgaarsiin dheer iyo qoto dheer marka la barbardhigo warbaahinta bulshada iyo noocyada kale ee farriimaha. Xaqiiqdii, suuqleyda B2B waxay yiraahdaan suuqgeynta iimaylka waa 40 jeer ka waxtar badan warbaahinta bulshada soo saarista hoggaamiyeyaasha
Kaliya maahan in emaylku tagi doono waqti dhow, laakiin mustaqbalku wuxuu umuuqdaa mid ifaya, mahadnaqa tiknoolajiyada sirdoonka farsamada ee u diyaar garoobaya inay dib-u-cusbooneysiiyaan khibrada emailka. Adigoo falanqeynaya qaab-dhaqameedka qaatayaasha furitaanka, tirtirka iyo ku shaqeynta emayllada, AI waxay ka caawin kartaa suuqleyda inay jaangooyaan emaylkooda macaamiisha 'iyo rajooyinka' dookhyada gaarka ah.
Ilaa hadda, hal-abuurnimo badan oo suuq-geyn ah oo ku saabsan emaylka waxay udub-dhexaad u tahay waxyaabaha ku jira. Waxaa jira warshad dhan oo loogu talagalay inay gacan ka geysato abuurista farriinta ugu habboon ee emaylka si looga codsado jawaab iyo ficil. Cusbooneysiinta kale waxay diirada saareen liisaska. Liisaska xaraashka. Liisaska koraya. Qor nadaafadda.
Intaas oo dhami waa muhiim, laakiin fahamka goorta iyo sababta ay emayllada furanayaan emaylku wali waa qarsoodi - waana mid muhiim ah in la xalliyo. Inbadan dir, adiguna waxaad halis u tahay macaamiil kaa xanaajisa. Ha u dirin wax ku filan nooca saxda ah ee emaylka - waqtiga saxda ah - waxaadna halis ugu jirtaa inaad ku lumiso dagaalka sii kordhaya ee loogu jiro sanduuqa guryaha.
In kasta oo suuqleydu ay dadaal xoog leh u galeen sidii ay u shakhsiyeyn lahaayeen waxyaabaha ay ka kooban yihiin, haddana feejignaanta ku saabsan habeynta habka gaarsiinta ayaa yareyd. Illaa iyo hadda, suuqleyda waxay waqti ku qabteen qaybinta emaylka tiro ahaan iyada oo loo marayo caqli-gal ama caddayn aan caddayn oo laga soo ururiyey kooxo waaweyn laguna falanqeeyey gacanta. Marka lagu daro martigelinta marka emayllada ay u badan tahay in la akhrin doono, falanqaynta dhabarka-maro-duuggu runti kama hadleyso marka dadku u nugul yihiin inay ka jawaabaan oo ay tallaabo qaadaan.
Si aad u guuleysato, suuqleyda ayaa si sii kordheysa looga baahan doonaa inay lashaqeeyaan gudbinta farriimaha suuqgeynta ee ku saleysan emaylka sida ay ulashaqeeyeen nuxurka farriimahaas. Thanks to horumarka AI iyo barashada mashiinka, shaqsiyan gaarsiinta noocan ah waxay noqoneysaa mid dhab ah.
Teknolojiyada ayaa soo ifbaxeysa si ay uga caawiso suuqleyda inay saadaaliyaan waqtiga ugu fiican ee ay fariin u diraan. Tusaale ahaan, nidaamyadu waxay baran karaan in Sean uu aad ugu nugul yahay inuu wax akhriyo waxna ka qabto emayllada cusub 5:45 PM inta uu tareenka tareenka u raacayo. Trey dhanka kale wuxuu inta badan aqriyaa emaylkiisa sariirta ka hor 11 PM laakiin waligiis wax ficil ah ma sameyn ilaa uu fadhiisto miiskiisa subaxa dambe.
Nidaamyada wax lagu barto mashiinka ayaa ogaan kara astaamaha habeynta iimaylka, iyaga xusuusnaada oo hagaajin kara jadwalka si loogu diro farriimaha dusha sare ee sanduuqa inta lagu jiro daaqadda hawlgalka ugu habboon.
Suuqgeyaal ahaan, waxaan sidoo kale qadarinaynaa in rajooyinka ay leeyihiin liis soo koraya oo ah kanaalada isgaarsiinta la doorbido. Farriin qoraal ah. Barnaamjiyada fariimaha bulshada. Ku riix ogeysiisyada moobilka moobilka.
Si dhakhso leh, nidaamyada barashada mashiinka ee loogu talagalay doorbidista dirista emaylka waxay baran karaan kanaallada la doorbido si ay u gudbiyaan farriimaha. Mawduuca saxda ah, oo lagu bixiyo waqtiga saxda ah, iyada oo loo marayo kanaal doorbidaya waqti cayiman.
Is dhexgal kasta oo aad la yeelatid macaamiisha waa muhiim. Is dhexgal kasta oo aad la yeelato macaamiisha ayaa fursad u ah inaad ku darto jawaab celinta kor u qaadeysa safarkooda iibsashada siyaabo cusub oo kala duwan. Qof kastaa wuxuu leeyahay qaabab iibsi oo kala duwan.
Dhaqan ahaan, suuqleyda ayaa saacado aan dhammaad lahayn ku qaatay sidii ay khariidad ugu sameyn lahaayeen safarada tooska ah ee iibsashada kooxaha macaamiisha waaweyn ka dibna ku shubtay sibidh hawsha. Nidaamyadu ma laha waddo ay kula qabsadaan isbeddelada lama huraanka ah ee qaababka wax iibsiga ee shaqsiyan mana la falgeli karaan wixii isbeddel deegaan ah.
Iyada oo emaylka la filayo inuu ahaado xiriir muhiim ah oo udhaxeeya shirkadaha iyo macaamiisha, doorka AI ee barida eyga 45 jirka ah tabaha cusub waa soo dhaweyn soo dhaweyn ah. Nidaamyada otomaatiga suuqgeynta waa inay hadda noqdaan qabaa ku saabsan macaamil kasta, qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha ku jira, kuna waafajiso waqtiga dhabta ah si loola kulmo yoolalka ganacsiga. Gudbinta emaylka ee xariifka ahi waxay u baahan tahay inay qayb muhiim ah ka noqoto taas.
Tags: Act-Onaisirdoonka macmalb2bsafarka iibsashadaEmail Marketingjiilka ledbarashada mashiinkaemaylka suuq geynta
Michelle waa Act-On SoftwareSarkaalka Sarkaalka Suuqgeynta, wuxuuna kormeeraa sumcadda shirkadda, dalabkeeda, iyo dadaallada suuqgeynta ballaarinta macaamiisha. Michelle waxay u timaadaa Act-On iyadoo leh 17 + sano oo khibrad ah oo ka caawineysa shirkadaha hogaaminaya suuqa, oo ay ku jiraan Salesforce iyo Oracle, inay ku xirmaan macaamiisha xalalka teknolojiyadda si ay u kobciyaan ganacsigooda. Ugu dambayntiina, Michelle wuxuu ahaa GM qaybinta Xogta Salesforce qaybteeda Data.com ka dib markii uu u adeegay VP ee Suuqgeynta kooxda. Kahor shaqadeeda Salesforce, Michelle waxay ahayd Agaasime Sare oo ka tirsan Oracle iyo Maareeye Suuqgeyn Sare oo Suuqgeyn ah oo heer sare ah (oo ay heshay Oracle).